» कस्तो बनाउने अबको हेटौंडा ?
कस्तो बनाउने अबको हेटौंडा ?
शहरी विकास विज्ञ भन्छन्-नयाँ ठाउँमा शहर, मेयर भन्छन्-फूलैफूलको शहर, विकास अभियन्ता भन्छन्-प्रविधीमैत्री शहर
५ श्रावण २०७६, आईतवार ११:२६
मकवानपुर । प्रदेश ३ को राजधानी हेटौंडालाई विकास र समृद्दिको सम्भावना बोकेको शहरका रुपमा विज्ञहरुले लिन्छन् । बसोबासका दृष्टिमा उपयुक्त वातावरण भएको विकासोन्मुख शहर हेटौंडाको विकास कसरी गर्ने, हेटौंडा कस्तो बनाउँने भन्ने विषयमा विज्ञहरुका बिचमा बहस चलाउँनु आवश्यक छ ।
हेटौंडामा जनघनत्व बढ्दैछ, संरचनाहरु धमाधम थपिदैछ । विकास निर्माणका कार्यहरु अघि बढिरहेका छन् । तर हेटौंडाको विकास तथा सम्भावनालाई केही पाटाहरुले अवरोध गर्लान् कि भन्नेमा उत्तिक्कै चिन्ता छ । खासगरी अहिले हेटौंडाको सडक २५ मिटर बनाउँने विषयले चर्चा पाइरहेको छ । सडक विस्तार नगरी हेटौंडाको विकासले गति नलिने र विस्तार गर्दा सडकक्षेत्रमा पर्ने संरचना भत्काउन स्थानीयको अवरोधका कारण विस्तार कार्य पटक पटक सुरु हुदै रोकिदै आइरहेको छ । हेटौंडामा तीन वटा राष्ट्रिय राजमार्ग जोडिनु, विभिन्न पर्यटन, कृषि, उद्योगको विकास हुदै जानुले हेटौंडाको मुहार फेर्न सक्छ । तर यसका लागि साविक एघार वटा र पछि थपिएका ८ वटा वडाका लागि आवश्यकताका आधारमा छुट्टाछुट्टै रुपमा विकास गर्नुपर्ने विकास विद्हरुको सुझाव छ ।
हेटौंडामा विगत २३ वर्ष शहरी विकास तथा वातावरणका क्षेत्रमा क्रियाशील विज्ञ बिके महर्जन अब हेटौंडाको विकास पूर्वी क्षेत्रबाट हुने बताउँछन् । ‘अबको हेटौंडाको विकास भनेको पूर्व क्षेत्रबाट हो ।’ महर्जन भन्छन्, ‘हेटौंडालाई मुख्य तीन वटा राष्ट्रिय राजमार्गले जोड्छ, फास्टट्रयाक, कान्तिलोकपथ र अर्को हो धरान चतरा सडक । यी तीन वटै सडक पूर्वबाट लिङ्क छ ।’ हेटौंडाको अहिले जति विकास भएको छ त्यो दक्षिणबाट भएकोले अब हेटौंडाको पूर्वि क्षेत्र हटिया-हर्नामाडीलाई शहरका रुपमा विकास गर्नुपर्ने महर्जनको सुझाव छ ।
अबको हेटौंडा, पूरानो होइन पहिचान सहितको नयाँ हेटौंडा बनाउँनुपर्ने महर्जनको भनाई छ ।
नेपालकै केन्द्र भाग हेटौंडा भएकाले हेटौंडाको विकासका सोही बमोजिमको सोच सहित विकासका लागि बजेट विनियोजन गर्दै अघि बढिएको हेटौंडा उपमहानगरपालिकाको भनाई छ । उपमहानगरले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को लागि एक अर्ब ८१ करोड १८ लाख रुपैयाँ विनियोजन गर्दै विकास कार्य अघि बढाइने प्रमुख हरिबहादुर महत बताउँछन् । अबको हेटौंडा विकास सहितको ‘हरियाली हेटौंडा’ बनाउँने आफ्नो अभियान रहेको महत बताउँछन् । भन्छन्, ‘हेटौंडालाई सफा, हरियाली, फूलैफूलको शहरको रुपमा विकास गर्ने हाम्रो योजना छ ।’
बहुवर्षिय योजना र अल्पकालीन योजना बनाउदै हेटौंडालाई नमूनाको शहर बनाउँन आफूहरु लागिपरेको प्रमुख महतको भनाई छ । ‘सडकलाई फराकिलो बनाउँने, पछि थप गरिएका विभिन्न वडामा विकासका सबै पूर्वाधार पुर्‍याउँने अल्पकालीन योजना अन्तर्गत कार्य गरिदैछ भने बहुवर्षिय योजना अन्तर्गत नमूनालायक बस टर्मिनल बनाउँने, कर्रा करिडोर निर्माण गर्ने, भ्यू टावर निर्माण गर्ने, अटो भिलेज बनाउँने लगायतका योजना अघि सारेका छौं ।’ महत योजना सुनाउँछन् । महत भौतिक पूर्वाधारले मात्र हेटौंडा नबन्ने बताउँदै सामाजिक सहयोग, जागरणका कार्यलाई पनि संगसंगै लैजानुपर्ने आवश्यकता रहेको बताउँछन् ।
कहिले ग्रेटर हेटौंडा, कहिले स्मार्ट सिटि बनाउँने भनेर बेला बेला बहस भए अनुसार हेटौंडालाई अब कस्तो बनाउँने भन्नेमा भिजन भएका नेताले बेलैमा सोच्नुपर्ने हुन्छ । प्रदेश ३ को राजधानी हेटौंडामा कायम गराउँन लागिपरेका सामाजिक अभियन्ता ध्रुवप्रसाद चौलागाईं अबको हेटौंडा प्रविधीमैत्री हुनुपर्ने बताउँछन् । भन्छन्,‘प्रविधीको प्रयोगबाट हेटौंडाको विकास र समृद्घिका लागि योजनावद्द रुपमा लाग्नुपर्छ । हेटौंडामा अब हरेक विकास गर्नका लागि सडक फराकिलो पार्नुपर्छ ।’ अभियन्ता चौलागाईं हेटौंडाका सबै घरको डिजाइन एउटै खालको हुनुपर्ने, त्यसो भएमा हेटौंडा शहरको घर यस्तो भन्ने पहिचान हुने, ढल, पानी अप्टिकल फाइबर अन्डरग्राउन्डमा राख्नुपर्ने बताउँछन् । ‘विकास गर्नका लागि जहिले पनि खन्ने, भत्काउँने होइन अब दिर्घकालीन रुपमा प्राथमिकता सहित एक पटक गरेको योजनाले स्थायित्व पाउँनुप¥यो ।’
युवा व्यवसायी राजाराम बोगटी हेटौंडा विकासका लागि पर्यटन व्यवसायलाई जोड दिइनुपर्ने बताउँछन् । अबको समृद्दि पर्यटनबाट सम्भव भएकाले स्थानीय, प्रदेश तथा संघीय सरकारले पर्यटन क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने उनको भनाई छ । हेटौंडामा अथाह सम्भावना तथा अवसर भएकाले त्यसलाई चिनेर योजना बनाउँदै अघि बढ्नुपर्ने सरोकारवालाको चाहना छ । जिल्ला समन्वय समिति मकवानपुरका प्रमुख रघुनाथ खुलाल हेटौंडामा कृषि र पर्यटन क्षेत्रबाट प्रगति गर्न सकिने बताउँछन् । भन्छन्, ‘यहाँ कृषिका लागि ठूला-ठूला फाँट छन् । पर्यटनका लागि विभिन्न पूर्वाधारहरु सहिद श्मारक, त्रिवेणीधाम, गोरक्षेश्वर, भुटनदेवी, चुरियामाई मन्दिर लगायत छन् ।’ यी विभिन्न सम्पदाबाट हेटौंडालाई समृद्द बनाउँन सकिने प्रमुख खुलाल बताउँछन् । ‘कृषि, पर्यटन र उद्योगका क्षेत्रमा विकास गरेर जान सकिएमा हेटौंडाको भविष्य उज्यालो छ। ’ खुलाल भन्छन् ।
प्रदेश ३ को राजधानी, कोलाहलबाट मुक्त भौतिक पूर्वाधार, हावापानी, धार्मिक सहिष्णुता भएको शहर हेटौंडा काठमाडौंबाट नारायणगढ हुँदै २२४ किलोमिटर, भैंसे-सिमभन्ज्याङ-नौबिसे १३२ किलोमिटर, भीमफेदी-फर्पिङ हुँदै राजधानी जोडने ८२ किलोमिटर, फाखेलको खडपु-मातातीर्थ हुँदै राजधानी प्रवेश गर्न ७९ किलोमिटर दूरीमा छ ।
हेटौंडा अहिलको स्वरुपमा आउँनुमा विभिन्न चरण पार गर्नुपरेको इतिहास छ । वि.सं. २०११ सालको बाढीपछि हेटौंडाको विकासका अभियन्ताहरुले योजना बनाउँदै अघि बढेर सम्भव भएको हो । वि.सं.२०२६ सालमा नगर पञ्चायत हेटौंडा भएको बेलामा वि.सं.२०३९ सालसम्म खासै विकास भएन । मकवानपुर जिल्लाको सदरमुकाम भीमफेदीबाट हेटौंडा सारिएपछि हेटौंडा विकासको गतिमा अघि बढेको पाइन्छ । हेटौंडा विकासका लागि अगाडी बढाउँन बाशुदेव रिजाल, ओमुटेम्पा लामा, निरशङ्कर श्रेष्ठ, अहिले प्रदेश ३ का मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेल जस्ता व्यक्तित्वको योगदान रहेको पाइन्छ । हेटौंडामा १.६६ वर्ग किलोमिटर क्षेत्र भएको वडादेखि ४७ वर्ग किलोमिटर भएको वडा भएको विभिन्न अवसरसंगै चुनौतीहरु पनि छन् ।
चुरे र महाभारत पर्वतको फेदीमा अवस्थित देशकै सफा तथा सुन्दर शहरका रुपमा परिचित हेटौंडामा बढ्दै गइरहेको मानवबस्ती, प्रशासनिक, औद्योगिक र शैक्षिक क्षेत्रमा विकासले फड्को मारिरहेको छ । हेटौंडा समुद्री सतहबाट ३ सयदेखि ३ सय ९० मिटरको उचाइमा रहेको शहर हो । ‘हेडम्बा’ र शक्ति स्वरुपिणी माता भुटनदेवीको ऐतिहासिक तथा धार्मिक पृष्ठमूमि हेटौंडाको कुल क्षेत्रफल २६१ दशमलब ५९ वर्ग किलोमिटर छ ।